Amerika Atsimo, Fikarohana lalam-pizahantany, ary maro hafa
Ho an'ny mpampianatra Homeschooling
Amerika Atsimo printable
Fikarohana teny - Aza manasaraka antsika
Hatramin'ny Monroe Fotopampianarana - fanambarana mivantana nataon'ny filoha James Monroe tamin'ny taona 1823 dia nilaza fa tsy hanaiky ny faneriterena an'i Eoropa amin'ny raharahan'i Amerika Avaratra na Atsimo ny Etazonia fa ny Etazonia dia mifamatotra akaiky amin'ny mpifanolo-bodirindrina aminy any atsimo. Ampiasao ity fikarohana ity mba hanampiana ireo mpianatra hianatra momba an'i Amerika Atsimo , izay misy firenena tsy miankina 12: Arzantina, Bolivia, Brezila, Chile, Kolombia, Ekoatera, Guyana, Paragoay, Però, Suriname, Orogoay ary Venezuela.
Vocabulary - Tantaran'ny ady
Ny amerikana Amerikana dia tafiditra amin'ny tantara miaramila izay azonao ampiasaina mora foana mba hisarihana ny sain'ny mpianatra rehefa mameno ity asa soratana voambolana ity izy ireo . Ohatra, nitifitra ny ady tao Falklands taorian'ny nanafihan'i Arzantina ny Nosy Falkland any Angletera tamin'ny 1982. Ho setrin'izany, nandefa miaramila ho any amin'ilay faritra ny Anglisy ary nanosika ireo Arzantina - nitarika ny fianjeran'ny Filoha Leopoldo Galtieri, lehiben'ny ny junta miaramila ao amin'ny firenena, ary ny famerenana indray ny demokrasia aorian'ny taona jadona.
Crossword Puzzle - Nosy Devil
Ny Iles du Salut, avy any amin'ny morontsirak'i Guyane Frantsay, dia nosy mangatsiatsiaka sy tritika izay toerana nipetrahan'ny vaingam-panjakan'i Devil malaza. Ile Royale dia toerana fitsangatsanganana ho an'ireo mpitsidika an'i Guyane Frantsay, tebiteby azonao ampiasaina mba hampidirana ny mpianatra aorian'izy ireo hametrahana piozila any Amerika Atsimo .
Sarotra - Ny tendrombohitra avo indrindra
Arzantina no tranokalan'ny tendrombohitra avo indrindra any Andrefana - Aconcagua, izay mahatratra 22,841 metatra. (Raha ampitahaina, Denali, tendrombohitra avo indrindra any Amerika Avaratra - miorina any Alaska - dia "20710 metatra".) Ampiasao ity karazana zava-mahaliana ity hampianarana ireo mpianatra any Amerika Atsimo taorian'ny nahavitan'izy ireo an'io asa soratra miavaka io.
Fanaovana ny Alphabet - Revolutionary Times
Bolivia, firenena kely raha ampitahaina amin'ny mpifanila aminy Brazil, Però, Arzantina ary Shily, dia matetika no tsy jerena amin'ny fianarana Amerikana atsimo - ary henatra izany. Ny firenena dia manolotra karazana sehatra ara-tantara, ara-kolotsaina ary hafa izay mety hahasarika ny fisainan'ny mpianatra. Ohatra, i Ernesto "Che" Guevara , iray amin'ireo endrika revolisionera manan-danja indrindra eran-tany, dia nakambana sy novonoin'ny tafika Boliviana raha nanandrana hanafaka an'io firenena kely Amerikana kely io, raha mbola afaka mianatra ny mpianatra rehefa avy nanao asa fanaovan- abidy .
Soraty sy soraty - Ampiharo izay fantatrao
Ny diapolo teo aloha dia tokony hanome ireo tanora mpianatra hevitra marobe mba hameno ity pejy fanoratana sy fanoratan'i Amerika Atsimo ity. Saingy, raha sahirana izy ireo hanatona hevitra amin'ny sary iray hanoratana na fehintsoratra iray hanoratana, asaivo asehon'izy ireo ny sasantsasany amin'ireo teny voatanisa ao amin'ny lisitry ny voambolana avy amin'ny slide No. 2.
Sarintany - Ambarao ny firenena
Ity sarintany ity dia manome fahafahana lehibe ahafahan'ireo mpianatra mahita sy mametaka ireo firenena any Amerika Atsimo. Fampindramana fanampiny: Asaivo karohin'ny mpianatra sy manoritsoritra ny kapitalin'ny firenena tsirairay amin'ny fampiasana atlas iray, ary asehoy azy ireo sary mahagaga avy amin'ireo renivohitra maro samihafa, ary miresaka momba ny sasantsasany amin'ireo lohahevitra goavana amin'ny tsirairay.
Fialan-tsasatry ny Febroary, Andro manokana sy zava-miseho
Tokony haka ny SAT na ny ACT ve ny mpampianatra ahy?
Fanontana maimaimpoana amin'ny andro Flag
Fanontam-pirintin'ny valandran'ny Valentine
Ahoana ny fampianaran'ny fampianarana Homeschool
Ny ampahany amin'ny bokotra Microscope
Tetikasa Math: Manambara ny fotoana ho 10 minitra, dimy minitra ary iray minitra
Game of Thrones: Best Quotes avy amin'ny Lord Varys
Nahoana no zava-dehibe ny saran'ny karbôna?
Yoohoo! Fampisehoana teatra
Raiso ny mistery nivoaka avy ao amin'ny CMA Awards - Ireto ny fandroson'ny mpandresy
Inona ny Novus Ordo?
Ny Ramayana: tantara malaza indrindra ao India
George Washington ilay lehilahy
Antony To Fankalazana Diwali ny Fetin'ny Fahazavana
Fandevenana fandeferana Islamika
Inona no fahasamihafana eo amin'ny fivavahana sy ny ara-panahy?
Oviana ny Fetin'ny Afobe?
Harambato ho an'ny parda sy harpa tsy anakalozana
Rakitra sy baiko Microsoft Word
2010 British Open: Mihazakazaka i Oosthuizen
Top 10 Guns N 'Roses Hira
Famaritana ny rano
Mendrika ny fiara ve ny fiarako?
Fandaharam-pianarana momba ny Fandrosoana Barazy
EISENHOWER Famerenana anarana sy orinasa
Boky bokotra maoderina mba hampianarana
Famakiana ny fahaiza-manaon'ny famakiana - Famerenana
University of Bloomsburg any Pennsylvanie